Prof. Geeddi oo maanta soo gaaray Nayroobi si uu uga qeyb galo goobjoog ahaan shir 14 bishan ka furmaya dalka Fransiiska, Col. Afguduud oo lagu eedeynayo qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo iyo beelaha deggan gobolka Jubbada Hoose oo maamulkii madaxweyne Yuusuf sameeyay laga qadiyay. Ruunkinet 12/06/07
Ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa galabta soo gaaray magaalada Nayroobi ee dalka Kenya.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay magaalada Baydhabo sheegayaan in uu ka qeyb galayo shir ay dalka Fransiiska isugu immaanayaa dalalka Fransiiska horay u gumeysan jireen.
Prof. Geeddi ayaa la sheegay in uu shirkan uga qeyb gali doono goob joog ahaan maadaama aysan dowladda faransiiska horay u gumeysan dalka loo yaqaan Soomaaliya.
Dhanka kale, warar aaan la xaqiijin balse ay dad badan isla dhex marayaan ayaa sheegaya in Col. Cabdirasaaq Afguduud uu ka dambeeyay bam shalay lagu tuuray goob fagaaro ah oo ay uga khudbeynayeen mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha dowladda qaar ka tirsan dadka ku nool magaalada Kismaayo.
Warka ayaa intaasi ku daraya in shaki weyn yimid kadib markii sida la sheegay uu Col. Afguduud ka baxay goobta lagu tuuray Bamka kadib markii uu dhameystay khudbadiisa in kasoo ay wararka qaar sheegayaan in laga codsaday in uu kursigiisa ku fadhiisto markii uu dhameeyay khubadiisa asagoo sheegay inuu u baxayo si uu u eego ammaanka goobtaasi.
Arrintan ayay dad badan sheegayaan in Col. Afguduud ula dan lahaa in ay ku le'daan mas'uuliyiin taageersan Barre Hiiraale iyo Col. Xiddig.
Dhinaca kale, maamulkii loo magacaabay Jubbada Hoose ayaa la sheegay in ay ka maqan yihiin dadka deegaan ee loogu yeero reer Guriga (Giir Giir).
Dadka loogu yeero Giir Giirta ayaa tan iyo intii ay heshay Soomaaliya xurnimadeeda waxaa si isdaba joog ah loogu xad gudbayay xuquuda ay ku leeyihiin degaankooda ayadoo mar kasta laga hortaagnaa in laga qeyb geliyo mas'uuliyiinta sare ee gobolka Jubbada Hoose.